De Jong oo ugu baaqay Balotelli inuu kula soo biiro Ac Milan | Goolhaye.com
De Jong oo ugu baaqay Balotelli inuu kula soo biiro Ac Milan
November 27th, 2012 by Home » Horyalaada » England » De Jong oo ugu baaqay Balotelli inuu kula soo biiro Ac Milan
De Jong oo ugu baaqay Balotelli inuu kula soo biiro Ac Milan	Cayaaryahanka qadka dhexe ee Ac Milan Nigel de Jong ayaa ugu baaqay saaxiibkiisii ay isku kooxda ahaayeen ee Mario Balotelli inuu kula soo biiro Ac Milan.
Mashiinka qadka dhexe ee Ac Milan Nigel de Jong ayaa bilowgii xagaagaan San Siro kaga soo biiray Manchester City, waxaana uu u gacan haatinayaa weeraryahanka reer Talyaani ee Balotelli.
“Waxaan aqriyay warar sheegaya in Mario uu ku soo wajahanyahay Milan, aan aragno waxa dhaca, mar walba waa ay wanaagsantahay in xiddig sidiisa oo kale aad isku koox noqotaan.”
“Way adagtahay in barbar dhig la sameeyo, qof walbana waxyaabo u gaar ah ayuu leeyahay, El Shaarawy waa mid kamida gooldhaliyayaasha ugu sareeya caalamka qaab wanaagsan ayuu u cayaaraa waana 20 jir iminka.”
“Runtii adiga isma waali kartid, Balotelli isagana sidoo kale, waa cayaaryahan wayn balse waa inuu dareemaa farxad si uu kubad wanaagsan u soo bandhiggo” ayuu u sheegay Nigel de Jong Wargeyska Tuttosport.
Mario Balotelli ayaa wargeysyada caalamku waxa ay ka qorreen in laga yaabo inuu kooxda ka taggo kadib qilaaf soo kala dhex gallay isaga iyo macalinkiisa Mancini, waxana isla markiiba dalabkeeda soo gudbisay kooxda Paris Sain-Germain, sidoo kale Milan ayaa iska diiday sida la sheegay in Balotelli ay ku badallato Pato.